ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Smart Home Wifi Touch Wall Switch ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Smart Home Wifi Touch Wall Switch ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်၊ သင်သည်မည်သည့်ပမာဏကိုမဆို WIFI စမတ်ခလုတ်ကိုယူနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Smart Home Wifi Touch Wall Switch ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ
1. Smart Home Wifi Touch Wall Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
2. Smart Home Wifi Touch Wall Switch အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1. နည်းလမ်းများကို ထိန်းချုပ်ပါ- panel ကိုထိပါ၊ smart life APP မှတစ်ဆင့် ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှု၊ alexa သို့မဟုတ် google home မှတစ်ဆင့် အသံထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် 433MHz RF ထိန်းချုပ်မှု။
2. Sensitive touch panel - smart phone touch ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အထိအတွေ့ ထိန်းချုပ်မှု။။ Smart Home Wifi Touch Wall Switch။
3. ခိုင်ခံ့သောဖန်ခွက် - ၎င်းသည် သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူပြီး အမြဲတမ်း အသစ်ဖြစ်နေသည်။
4. အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး - အက်ပ်အဝေးထိန်းခလုတ်မှတစ်ဆင့် သင်အလိုရှိသည့်နေရာတိုင်း။
5. LED ညွှန်ပြချက် - အနီရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် LED ညွှန်ပြချက်ဖြင့် အမှောင်ထဲတွင် ခွဲခြားထားသည်။ အနီရောင်က မီးလင်းနေပြီး အစိမ်းရောင်က မီးပိတ်ပါတယ်။
6. APP ပံ့ပိုးမှု - စမတ်ဘဝ သို့မဟုတ် tuya စမတ်အက်ပ်။
7. Timingâ€“သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌ အဖွင့်/ပိတ်ရန် အချိန်ဇယားဆွဲထားသော/ရေတွက်မှုအချိန်များကို သတ်မှတ်ပါ။
8. Share Controlâ€“သင့်မိသားစုနှင့်အတူ သင့်စမတ်အိမ်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။
9. Voice Control â€“ Alexa၊ Googl home နှင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
10. မြင်ကွင်းထိန်းချုပ်မှု- စက်အများအပြားအတွက် သော့တစ်ချက်-ထိန်းချုပ်မှု။
Smart Home Wifi Touch Wall Switch ၏ သတ်မှတ်ချက်
ပါဝါပလပ် US/EU/AU စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
လည်ပတ်မှုစနစ် ios နှင့် android OS တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကြိုးမဲ့အထောက်အပံ့ 2.4GHz Wifi + RF433MHZ
အသံထိန်းချုပ်မှု amazon alexa၊ google home...
ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် ဘယ်နေရာမဆို
ထိန်းချုပ်နည်း ထိတွေ့မှုဘောင်၊ အက်ပ်ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် အသံထိန်းချုပ်မှု၊ RF433MHz
hot Tags:: Smart Home Wifi Touch Wall Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်